Re कारण किन वर्डप्रेस प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो क्रिएटिव अनलाइन
जोस एन्जेल | | वेब डिजाइन, WordPress
WordPress दिनदिनै धेरै सामान्य हुँदै गइरहेको छ, यसलाई विश्वास गर या नगर। जे होस्, हामी सबै जो सुरू गर्छौं, हामी सबै भन्दा बढि पेशेवर वेबसाइट चाहन्छौं। यसको लागि हामी सोच्छौं कि त्यहाँ एउटा मात्र तरिका छ: वेब डिजाइनर। हामीलाई थाहा छ यो विकल्प महँगो छ र सबैजनाले यो सच्याउन सक्दैनन्। हाम्रो वेबसाइटलाई समर्पित कम्पनी, शून्य र त्यस पछि मर्मत गर्दै। यस अवस्थामा हामी यसको कुनै नकारात्मक विचारको साथ कुनै पनि सामग्री व्यवस्थापकको सहारा लिने छनौट गर्दछौं। तर वर्डप्रेस एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हो।
WordPress सबैभन्दा अधिक प्रयोग ब्लगिंग उपकरण हो। तर त्यहाँ रोकिनु भन्दा टाढा, WordPress प्रयोग गर्दा कुनै पनि प्रकारको तपाईंको व्यवसायलाई हल गर्न सक्दछ। यो स्टोर हो, क्रिएटिभ्स अनलाइन जस्तै डिजिटल समाचार पत्र वा नेटफ्लिक्स जस्तै 'होम थियेटर'। यस लेखमा हामी तीन कारणहरू दिन गइरहेका छौं किन कि वर्डप्रेसको प्रयोग अझै राम्रो विचार हो.
1 तपाईलाई चाहिएको कुरा बनाउनुहोस्
2 पैसा बचत सुरू गर्न आवश्यक छ
3 के यो गुगलका लागि राम्रो छ?
तपाईलाई चाहिएको कुरा बनाउनुहोस्
WordPress समुदाय विशाल छ र यसैले यसले धेरै व्यक्तिको चासो आकर्षित गरेको छ विभिन्न क्षेत्रबाट। नयाँ ग्राहकहरुबाट नयाँ विचारहरु संग, विकासकर्ताहरु धेरै अप्रत्याशित तरीकाहरुमा WordPress को उपयोग गर्ने सम्भावनाहरु को विस्तार गर्दै थिए। यो असीम अनुकूलन एउटा मुख्य कारण हो किनकि WordPress यति धेरै प्रचलित छ- केहि थप सुविधाहरू थप्दै, तपाईं कुनै पनि प्रकारको साइट सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंलाई आवश्यक छ। निश्चित रूपमा WordPress कार्यको साथ तपाइँको कार्य पूरा गर्न सक्षम नहुनेको मामलामा तपाईंले प्रयोगकर्ता द्वारा सिर्जना गरेको समुदायहरूले सिफारिस गरेका प्लगइनहरू फेला पार्नुहुनेछ। यी प्लग-इनहरू तपाईंको स्थापनामा थप कार्यहरू सक्रिय गर्दछ जुन यसको प्रयोगलाई पूरक गर्दछ।
तपाईं एक फोरम वा तपाईंको आफ्नै सामाजिक नेटवर्क पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। थोरै ट्वीक गर्दै, तपाईंको साइट द्विभाषी हुन सक्छ। एक WordPress घटना टिकटिंग प्रणाली प्लगइनले तपाइँको घटनाको लागि एक टिकट बेच्ने टिकट बनाउँदछ। तपाईले केहि धैर्यताका साथ प्राप्त गर्न सक्नुहुने सीमा छैन।, केहि राम्रो गुगल खोजीहरू, र सहि प्लगइन।
पैसा बचत सुरू गर्न आवश्यक छ
हामीले सुरुमा नै भनेझैं, यदि तपाईं कतै सुरु गर्न चाहानुहुन्छ तर धेरै पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने, वर्डप्रेस प्रयोग गरेर कुल सिफारिश गर्दछ। यो मात्र होइन कि WordPress पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ, यो खुला स्रोत पनि हो। तपाइँको लागी के मतलब छ? यसको मतलव सदा विस्तार हुने समुदाय सधै यसमा काम गरिरहेको हुन्छ। वर्डप्रेस प्रबन्ध बाहिरका व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान र विकासलाई परोपकारी रूपमा विस्तार गर्छन्। त्यसकारण नयाँ संस्करणहरू, अपडेटहरू, फिक्सहरू र एड्-अनहरू सधैं उपलब्ध हुन्छन्। वास्तवमै सरल र सहज ईन्टरफेस। स्तम्भमा बिभिन्न सेक्सनहरूमा विभाजित गरिएको छ जुन नामहरूमा इ indicates्गित गर्दछ कि कुन कार्यहरू तपाईं तिनीहरू प्रत्येकमा प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
आधारभूत साइट सिर्जना गर्न अनुभव वा ज्ञानको आवश्यक पर्दैन, र तपाईंसँग शायद समय छ। यदि तपाईं दिमागमा अधिक विशिष्ट र गम्भीर परियोजना छ भने, यो त समस्या पनि होइन, तर तपाईंसँग थोरै ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यहाँ कुनै पनि प्रयोगको लागि हजारौं (यदि लाखौं होइन भने) नि: शुल्क थिमहरू उपलब्ध छन् तपाईको दिमागमा जे पनि छ, र संख्या निरन्तर बढ्दैछ।
यदि वेबमा केही कार्यक्षमता कार्यान्वयन गरिएको छैन जुन तपाईं WordPress सँग गर्नुहुन्छ र तपाईंसँग यसमा प्रोग्राम गर्न पर्याप्त ज्ञान छैन भने तपाईं यसलाई सित्तैमा प्राप्त गर्न निःशुल्क वा सशुल्क प्लगइनहरू स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। के अधिक, त्यहाँ सधैं एक श्रृंखला छ प्लगइन हुनै पर्छ WordPress को लागि जुन तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइट वा ब्लग सिर्जना गर्न सुरू गर्दा ठूलो सहयोगी हुनेछ।
यसका लागि धन्यवाद, यूट्यूबमा धेरै ट्यूटोरियलहरू उपलब्ध छन्। नि: शुल्क एडअन्सको साथ तपाईंको आफ्नै वेबसाइट निर्माणले तपाईंलाई धेरै पैसा बचत गर्न सक्दछ।
के यो गुगलका लागि राम्रो छ?
कम ज्ञात लाभहरू मध्ये एक, तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि WordPress अन्य प्लेटफार्महरूमा छ, के यो गुगलमा राम्रो स्थानमा छ?। राम्रो श्रेणीकरण महत्वपूर्ण छ, र यो जटिल व्यवसाय भएकोले कुनै पनि मद्दत स्वागत छ। यो तार्किक छ कि यदि हामी हाम्रो समय र पैसा लगानी गर्छौं भने हामी यो चाहन्छौं कि यसलाई जनताबाट राम्रो आकर्षण छ। त्यसैले हामी हाम्रो सबै प्रयासलाई लाभदायक बनाउन सक्दछौं। सबै भन्दा पहिले, वर्डप्रेस एक तरीकाले लेखिएको थियो जसले खोज इञ्जिनहरूलाई पढ्न र श्रेणी दिन सजिलो बनाउँदछ, एक सरल कोड को लागी धन्यवाद। दोस्रो, यसको प्रयोगको सजिलोसँग, यो लगातार अपडेट गर्न WordPress प्रयोग गर्न सजिलो छ।
यी धेरै साधारण कारणहरूको साथ, यो स्पष्ट छ कि WordPress प्रयोग गर्दा धेरैको कार्यको सुविधा दिन्छ। र यदि तपाइँ अझै पनी यसको व्यवसायको लागि हुन सक्ने क्षमताहरूमा शंका गर्नुहुन्छ भने ब्लग नेटवर्क को तथ्या at्क हेर्नुहोस् समाचार ब्लग, WordPress संग बनेको।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » Re कारण किन वर्डप्रेस प्रयोग गर्नु राम्रो विचार हो
Photos निःशुल्क प्लगइनहरू हाम्रो फोटोशप पूरा गर्नका लागि